Muzvare Khupe Voshandisa Masimba Avakapihwa Kudzinga Nhengo dzaVaChamisa Muparamende
Nhengo nhatu dzedare reNational Assembly pamwe nenhengo imwe chete yedare reSenate dzadzingwa neMDC-T inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe dzichinzi hadzichakodzeri kuramba dziri mumatare aya.
Vadzingwa mudare reNational Assembly inhengo dzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa dzinoti mumiriri weKuwadzana East, VaCharlton Hwende; mumiriri weDangamvura, VaProsper Mutseyami, pamwe nevanomirira dunhu reBulawayo, Muzvare Tabitha Khumalo.
Vadzingwa mudare reSenate ndiAmai Lillian Timveous vekuMidlands.
Vachivizisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauriri wedare iri, Advocate Jacob Mudenda, vati vakatambira tsamba kubva kuMDC-T mukutanga kwemwedzi wapfuura ichavaudza kuti VaHwende, VaMutseyami pamwe naMuzvare Khumalo, vakange vasisamirire zvidzo zveMDC-T.
Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nesangano rinoona nezvesarudzo, reZimbabwe Electoral Commission, kuti kuitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi.
Kudare reSeneti, Amai Timveous vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, Amai Timveous vati vakatyamadzwa zvikuru nezvaitika vakati ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzinga mudare neMDC-T sei?
VaHwende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamiririwa naVaNelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo Advocate Nelson Chamisa.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly, zvakare vari mumwe wevatevedzeri waVaChamisa, VaTendai Biti, vaudza Studio7 kuti vashamisika nezvaitika vachiti bato reMDC-T ringadzinge seyi nhengo dzisiri dzaro muparamende.
Muongorori wezvematongerwo enyika, uye vari mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vati vanoona sekuti mamwe mapato pamwe neparamende zvave kutora matanho pamakakatamwa ari mubato reMDC.
Asi murairidzi wepaGreat Zimbabwe University, VaJoel Mukusha, vati zvaitika izvi hazvinei nemamwe mapato kana paramende, vakati zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vaudza Studio7 kuti bato ravo harinei nezviri kutika mune mamwe mapato vakati MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva.
Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pahutungamiri hwaro hwa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai, muna Kukadzi 2018.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nedzematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa naMuzvare Khupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi raVaChamisa, asi dzimwe nyanzvi dzikati mutongo uyu wainge wasara mushure menguva.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raMuzvare Khupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete danho rekudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate, sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata.